Sosialim-bahoaka anaty fihibohana :: Hizaràna vatsy misimisy ireo tokantrano roa hetsy • AoRaha
Manatevina ny vatsy ho an’ ireo tokantrano tsy manana fidiram-bola, vokatry ny fihibohana ao anatin’izay hamehana ara-pahasalamana izao, ny fanjakana. Tokantrano roa hetsy amin’ireo iray tapitrisa manerana ny Nosy no hahazo anjara amin’izany ho an’ ny eto an-drenivohitra. Nosantarina, tetsy amin’ny kianja Malacam, afak’omaly, ny fizaràna ny vatsy misimisy sy tokony haharitra andro maro ho an’ireo tokantrano roa arivo avy amin’ ny boriborintany telo, izay nahitana vary 25kg, siramamy 1kg, sira, menaka roa litatra ary tambavy Covid-organics. Hentitra momba ny fanomezana an’ireo vatsy ho an’ny rehetra tena mila izany ny Filoha Rajoelina Andry, raha nitarika ny fizaràna an’ireo fanampiana ireo, teny Antanimena, satria mitentina 20 tapitrisa dôlara na manodidina ny 75 000 tapitrisa ariary ny teti-bidin’izao « sosialimbahoaka » natao fanamaivanana ny fahasahiranana noho ny fiatoan’ny sehatra asa amandraharaha maro izao.
Napetraky ny Filohan’ny Repoblika eny an-tsorok’ireo tompon’andraikitra eny ifotony indray ny fahendrena sy fahamarinana amin’ny fahaizana mandamina ny fizaràna, ka hisorohana indray ny fitarainan’ ny mponina. “Eny anivon’ny boriborintany no hanaovana ny sivana ho an’ireo olona hisitraka ny vatsy. Ireo lehiben’ny fokontany no mandamina ny fotoana amin’ny fitsinjarana. Ren’ny fanjakana ny fitarainanareo mikasika ny fahakelezan’ilay sosialim-bahoaka 30 000 ariary, ka izao nampitomboana izao mba hahafahana miatrika ny fihibohana mandritra ny dimy ambin’ny folo andro, na hatramin’ ny iray volana mihitsy aza”, hoy ny Filoha.
Samy hahazo ny anjara vatsiny ny isam-paritra satria hitohy any amin’ny faritra hafa, manomboka anio, ny hetsika sosialimbahoaka. Hisy hatrany ny fizaràna hatao isan’andro. Tokony hiantoka ny fanaraha-maso amin’ny mety trangana fanodinkodinana ny vatsim-bahoaka kosa ireo solombavambahoaka. An-kilany, miato ny fitsinjarana an’ilay fanampiana 30 000 ariary hakana entana ilaina amin’ny andavanandro, toy ny vary, menaka, siramamy, atody, voamaina sy savony amin’ ireo tsena eny anivon’ny fokontany. Nahavelon-taraina an’ireo olona sasany izany, satria very maina ny fahazoan’izy ireo ny tapakila hakana ny entana, efa ho herinandro. Tsy manome entana intsony kosa ireo mpivarotra manokana noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny vola vidin’ entana, araka ny fanazavana.
Nohazavain’ny tao amin’ny Boriborintany fahadimy anefa fa mandeha tsara ny tetikasa tsena sosialim-bahoaka, amin’ izao fotoana izao. Any amin’ny fandefasana ny volan’ireo mpivarotra no misy fahatarana sy mananosarotra kely. Tsy maintsy mahazo ny entana avokoa ireo efa nahazo tapakila rehetra.
Tokantrano dimy arivo sy efatra alina eto Antananarivo renivohitra no tokony hisitraka an’ireo karazan’entana eny amin’ ny tsena sosialim-bahoaka.
Fodiamandry :: Nahatsiaro an’i Danny Rabemananjara ny Fimpima
Fanofanana mpilalao :: Hanokatra sekolin’ny baolina kitra vehivavy ny Ajesaia Ivato